SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN safarkii shanaad ee Sindibaad iyo odaygii badda. Qeybtii 44aad. – Filimside.net
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN safarkii shanaad ee Sindibaad iyo odaygii badda. Qeybtii 44aad.
February 8, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Taariikhda: February 8, 2019
Sheekada waxay noo mareysay markii aan odaygii caawiyay misna geedkii hoostiisa geeyay oo uu igu dhagay sidoo kalana uuna bilaabay I nuu I garaaco.
Odayga sidaan moodayay ma ahan wuxuu noqday mid aad u xoogan waxaana layaab igu noqotay siduu dhabarkeyga u saaranyahay oo ugu dhaganyahay ugana dhaceynin, sidoo kalana wuxuu rabo ayuu iga sameysan karay waayo wuxuu ahaa mid aad u xoog badan anigana ma laheyn tamar iyo awood aan ku khilaadi karo waxaana noqday sidii neef uu liijaanta u hayo dhankuu doonanan u hagi karo.
Odayga wuxuu ahaa mid sidaas dhabarkeyga u saran sidoo kalana hadii aan hadalkiisa khilaafo wuu I garaacayay xitaa hadii kaadi iyo saxaro qabato igama uusan dageynin oo korkeyga ayuu ku sameyn jiray.
Wuxuu igu amray inaan geeyo beer uu ii tilmaamay taasoo ay ka baxayeen noocyo badan oo miro ah wuxuuna ahaa mid mirahaas cunakuna nool, miraha beerta waxaa kamid ahaa canabka waxaana aqaanay sida miraha canabka loo khamiiriyo isla markaasna khamri looga sameeyo, markaas ayaan bilaabay inaan mitrihii khamri ka sameeyo.
Markii aan khamrigii sameeyay ayaan bilaabay inaan cabo si aan isku ilowsiiyo kurbadaan iyo hamigaan aduun ee aan ku jiro odaygana wuxuu ahaa mid I arko waxaan sameynayo wuuna I weydiiyay waxay yihiin, markaas ayaan u sheegay kadibna keen ayuu dhahay waana u dhiibay asigoo dhamaan wada cabay.
Markii uu odaygii khamrigii cabay ayuu wuxuu bilaabay inuu qoslo kadibna fooriyo wuxuna ahaa mid aad u skhraamay taasna waxay ii noqotay fursad aan uga takhaluso markaas ayaan si tartiib ah isaga dajiyay mana uusan I dareemin maadaama uu aad u sakhraansanaa.
Markii aan ku guuleystay inaan odaygii iska dajiyo ayaan dhulka seexiyay waxaana soo qaatay dhagax weyn anigoo ka cabsanayay inuu igu soo kaco markaas ayaan dhagaxii weynaa madaxa uga garaacay ilaa ay dhiigiisa iyo hilibihiisa isku darsameen oo madaxii aan ka baduujiyo waxaana u dilay si naxariis daro ah.
Muadadii aan odaygaas dhabarka ku siday waxaan dareemay ciriiri aan waligey horay u dareemin wuxuu ahaa mid korkeyga ku kaadiya kuna saxarooda si xuna ii garaaca alxamdulillaah ugu dambeyn waan ka taqalusay.
Markii aan odaygii dilay kana takahlusay ayaan ku fikiray sidii aan Jaziiradaan uga baxsan lalahaa, waxaana bilaabay inaan uruuriyo jirida qaar kamid ah geedaha jaziirada ku yaalay anigoo isku xirxirayo si aan uga sameeyo waxyar oo doon u eg taasoo aan jaziiradaan uga baxsado.
Markii aan howshii dhameeyay ayaan badii isku soo daayay ilaa aan maalinkii dambey doon ay dad saaranyihiin la kulmay dadkii ayaana sidii ku raacay.
Dadka waxay ahaayeen kuwa u socdo deegaankooda kaasoo ahaa jaziirad bada korkeeda ku taalo waxayna jaziiradaas ka dhaxeysay daanyeero iyo dad iyadoo daanyeerada ay habeenkii jaziirada soo gali jireen xilli dadkana ay maalinkii oo dhan joogayaan habeenkiina gurayahooda ku hoyan jireen mana jiro dad habeen soconaya ama daanyeer maalinkii soconayo.
Nadaamkaas wuxuu ahaa mid u dagsan oo heshiis horay uga dhaxeeyay ayuu ahaa waxayna dadka ii sheegeen in iyaga iyo daanyeerada oo ah kuwa aad u waaweyn sidoo kalana aad u xoogan ay jaziiradaas waxbadan ku dagaalameen sidoo kalana dad badan ku waayeen hase yeeshee ay ugu dambeyn heshiiskaas gaareen.
Sababta ugu weyn ee dadka iyo daanyeerada jaziirada isugu heysteen ayaa waxay aheyd jaziirada oo aheyd mid barwaaqo ah sidoo kalana nooc kasta oo miro ah ay ka baxaan waxayna laheyd biyo aan go’in aadna u macaanaa.
Markii aanjaziiradii in mudo ah joogay ayaa maalintii dambe waxaa jaziiradaas yimid markab ay wateen koox safarleey aheyd waxaana u sheegay inaan dhulkaan qariib ku ahay iina ogolaadaan inaan raaco si aan dhulkeygii dib ugu laabto weyna iga aqbaleen.
In mudo ah markaan jidka kusoo jiray ayaan ugu dambeyn imaaday magaalada Basra waxaana uga sii gudbay magaalada Baqdaad lkn toogtaan waxaan ahaa midaan wax hanta ah wadanin oo misna fara maran waxaana ku faraxsanaa anigoo bad qabo inaan magaaladeydii nabad ugu soo laabtay.
SAFARKII LIXAAD EE SINDIBAAD
Markii aan kazoo laabtay safarkeygii 5aad ayaan aad ugu farxay inaan magaaladii aan jeclaa dib ugu soo laabtay waxaana bilaabay in keydkii hantideyda ee magaalada ii yaalay ku ganacsado waxaana magaalada joogay in mudo ah ilaa aan maalinkii dambo la kulmay koox safarleey ah oo safar ka timid aadna ugu faraxsan in magaaladoodii dib ugu soo laabteen.
Markii aan in mudo ah soconay ayaa waxaa noo yimid naaquudihii markabka asagoo naleh; waxaan ku suganahay xaalada halis ah waayo markabkeena wuxuu ka baxay badii uu ku safraayay asigoo dhex galay bad aanan garaneynin dabeylahana waxay noo jiidayaan Jiho aanan ogeyn marka aan Alle barino si uu nooga badbaadiyo…….
La soco qeybta 45aad.
Waxaa Aqrisay 1,743
Waxaan sugaynaa qaybtii 45